uru - Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd.
Ikike nke ụlọ ọrụ
1. Anyị bụ ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta igbe ọkụ ọkụ na-echekwa ike maka ụlọ ahịa dị mma.Ọ dịghị intermediary Commission maka ịrụ ọrụ na anyị.
2. Ebe ọ bụ na e guzobere 7 afọ gara aga, ụlọ ọrụ ahụ enwetala akwụkwọ ikike mba anọ na ụlọ ahịa ụlọ ahịa dị mma n'ichepụta ọkụ igbe.
3. Ụlọ ọrụ anyị nwere ụlọ ọrụ ọkachamara na mpaghara 4,200 square mita na igbe ọkụ anọ na-emepụta ahịrị mmepụta.
4. Zhengcheng na-eje ozi ugbu a karịa ụdị 100 na China ma na-emepụta ihe dị ka mita 30,000 nke igbe ọkụ na-azọpụta ike kwa afọ.
5. Ụlọ ọrụ anyị goro ndị ọkachamara na-emepụta ihe iji nye ihe osise eserese maka akara ụlọ ahịa gị.Atụmatụ imewe anyị bụ n'efu.
4.The mbụ itinye ego na-eri nke na-amị nkịtị signboards bụ dịtụ ala, n'ihi na ndị a signboards na-akasị mere nke recycled acrylic ogwe.Otú ọ dị, ogwe ndị ahụ ga-adapụ, deform, dent na nsogbu ndị ọzọ n'ime ọnwa 3 ruo 5, nke na-ebelata ọrụ nke ihe ịrịba ama ahụ nke ukwuu.
5.In mmepụta igbe ọkụ ọdịnala, chloroform dilute gluu na-ejikarị ejikọta swatches na panels.Arụ ọrụ mkpuchi adịghị ike, ọ na-enwekwa ike inwe mmetụta nke okpomọkụ na ihe ndị na-emegharị emegharị na-eme ka ọkpụkpụ.Uzuzu na unyi ga-adị mfe ịnakọta na swatches na panel mgbe mmiri ozuzo sachara ya.Ya mere, a pụghị ihicha uzuzu na unyi, ha ga-emetụtakwa mmetụta ọkụ nke akara ngosi yana imebi ọdịdị nke akara ngosi.
6.Traditional ìhè igbe na-akasị ahaziri dị ka na saịtị akụkụ.Ọ bụrụ na ụlọ ahịa ahụ na-aga, ọnụego ojiji bọọdụ izizi erughị 5%.
Ihe kachasị mma nke ngwaahịa
1.More ọkọlọtọ, ọzọ ọkọlọtọ, ndị ọzọ n'otu, ọzọ adaba
Eserese ihe nhazi igbe ọkụ
2. Ihe mgbochi mmiri na uzuzu
Igbe ọkụ na-echekwa ike nke Zhengcheng na-ewere igbe pụrụ iche nke emechiri emechi nke ọma iji hụ na oghere dị n'ime igbe ọkụ ahụ adịghị ekpuchi elu ma kewapụrụ vepo, uzuzu na anwụnta kpamkpam.
3.Ingenious nhazi nhazi nhazi
4. Ultra obere ike oriri
Zhengcheng usoro ọkụ ọkụ na-azọpụta ike
Usoro ọkụ igbe omenala
Inweta ụlọ ahịa 100 nke otu ụdị ụlọ ahịa dị mma, akara ngosi ndị ahụ bụ 1m * 10m (awa 24), ọkụ na-enwu maka awa 12 kwa ụbọchị dịka ọmụmaatụ, ntụnyere oriri ike n'etiti igbe ọkụ na-echekwa ike nke Zhengcheng na ọkụ nkịtị. igbe.
Igbe ọkụ ọdịnala Igbe nchekwa ọkụ Zhengcheng Energy
ọkụ tube tube ọkụ edu (16w) Ihu ọkụ ọkụ nwere ogo 45 nwere ụdị V nwere ikike (28w)
ụzọ ọkụ Ahịrị 4 n'otu mita, oke ọkụ 1.1 mita kwa ahịrị, otu 9 na mkpokọta 7 modul (otu tube / otu modul) + 2 nkuku (ọkara tube / otu akụkụ), modul 8 na mkpokọta.
oriri eletrik 0.016kwh* 4 ahịrị* otu*12h/d*365d=2522kwh 0.028kwh*8 otu*12h/d*365d=981kwh
Ụgwọ ọkụ eletrik (1.2 CNY / KWH) 2522*1.2*100=302600CNY 981*1.2*100=117700CNY
Jiri igbe ọkụ na-echekwa ike nke Zhengcheng iji chekwaa ụgwọ eletrik n'ime otu afọ:
Afọ 5: 184900CNY/y*5=924500CNY≈138274.04USD
Akara ngosi, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Igbe nrịbama nke mpụga, Ihe nrịbama ụlọ ahịa,